ညီမတစ်ယောက် ရှိခြင်းက အကိုတစ်ယောက်အတွက် ဒုက္ခလား? | PoemsCorner
ညီမတစ်ယောက် ရှိခြင်းက အကိုတစ်ယောက်အတွက် ဒုက္ခလား?
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြောပါ ကျနော်ကတော့ ဒုက္ခလို့ မြင်ပါသည်။ညီမတယောက်က အကို တယောက်ကို ဒီလောက်တောင်ဒုက္ခတွေ ပေးပြီးစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တတ်မှန်းအစက ကြိုတင်ဆင်ခြင်ကြားသိထားရင် ကျနော်အမေ့ကို ညီမလေး တယောက်လောက်လိုချင်တယ်လို့ ပြောမိခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး.အဲဒီချိန်ကပြင်းပြနေတဲ့ စိတ်တွေက အခုနဲ့ တော့ဆန့် ကျင်ဖက်ပါ။အဖေအမေ ဆုံးပါးပြီးကတည်းက ညီမလေးက ကျနော့အပေါ်တခုခုကိုရည်ရွယ်ပြီးဒုက္ခပေးနေသလိုခံစားရပါသည်.သိရက်နဲ့ အသိစိတ်နဲ့ ကိုဆိုးနေတာပါ။
ကျနော့ကို ဒုက္ခပေးပုံတွေကို ပြောရ၇င် စာမျက်နှာတွေကို အားနာပါသည်။ဒုက္ခလို့ မြင်တော့ ကျနော့မှာ ညီမလေးမမြင်အောင် အမြဲ ရှောင်နေတတ်လာပါသည်.company၀န်ထမ်းကျနော် ညီမအိပ်ချိန် မျိူးမှာ အလုပ်တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ရပါသည်.သူနိုးချိန်မှာကျနော်အိပ်ပျော်အောင်အိပ်တခါတလေအိပ်ပျော်ယောင်ဆောင်နှင့် ကြာတော့ကျနော်လုံးပါးပါးလာပါသည်။ညီမလေးကြောင့်အလုပ်ထဲမှာလဲခဏခဏမျက်နှာပျက်ရပါသည်။
မလိုက်နိုင်ကြောင်းဒီPowerpoint တွေကို အပြီးလုပ်ရပြီးမနက်ဖြန်အလုပ်မှာpresentationတင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း
အမေသာရှိရင်” အမေရယ်သားမှားပါတယ် သားတယောက်ထဲနေပါရစေ ဖြစ်နိုင်ရင်သွားပစ်ပေးပါ”လို့ ပြောမိမည်။
အဲဒီမနက် အိပ်ယာအထမှ ကျနော်ခေါင်းမီးတောက်သွားပါသည် ကျနော်ညကလုပ်ထားတဲ powerpoint တွေအားလုံး
ဘယ်မှာမှ ရှာမရတော့ပါ အားလုံးကို deleteထားပါသည်။ဒါညီမလေးလက်ချက်ပါအချိန်ကနီးနေပြီ အခုသွားပြီးရုံးရောက်ရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရှေ့ အထက်လူကြီးများရှေ့ မှာ presentation တင်ရမည် သူ့တို့ တွေစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေဖို့သဘောပေါက်နားလည်ဖို့ ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမည်တင်ပြမည်ဆိုတာကိုညကသေသေချာချာစီစဉ်စဉ်းစားပြီးလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။အခုတော့အားလုံးပျက်ကုန်ပါပြီ။
ကျနော်ညီမလေးကိုစိတ်ပျက်မှူနှင့် အတူ ခုံမှာ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်နေမိသည်။”ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
ညီမလေးရယ်ဘာလို့ လုပ်တာလဲလို “့မေးရင် သူပြန်ဖြေမှာကို သိပြီးသားပါ “အပြင်ခေါ်တာလိုက်ခဲ့ရင် အခုလိုတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုကိုသိရက်နဲ့ အခုမှဘာမှမေးမနေနဲ့”လို့ပြန်ဖြေမှာကိုရိုးနေတဲ့ကျနော်အမှတ်မရှိတာဖြစ်သည်။
အဖေနဲ့အမေသာရှိရင် ဆိုပြီးခဏခဏ တမ်းတမိသည်။ယောကျာ်းတန်မဲ့ကျချင်နေတဲ့မျက်ရည်တွေကို လူမမြင်အောင်သိမ်း၇တဲ့ကျနော့ဘ၀။ညီမလေးသာလိမ္မာရေးခြား၇ှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုရင်
အလုပ်ထဲ အိပ်ချိန် အားလပ်ချိန် အချိန်တိုင်းတွင် ကျနော့ ညီမအတွက်စိတ်ညစ်နေရပါသည်။တနေ့တော့ ကျနော်သတိမထားပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ခေါင်းကအလွန်အကျွံကိုက်နေပါသည်။ဆေးသောက်လဲမပျောက်။ ကျနော့ရဲ့stressကအတော်လေးဆိုးရွားနေပါပြီ။ဆေးခန်းသွားပြမှလို့ တွေးပြီးဆေးခန်းရောက်လာပါသည်။
အလှည့်ကျလို့ အ၀င်မှာ အခန်းထဲမှာရပ်နေတုန်း အထဲမှ မိသားစုမှာ ဆရာဝန်နှင့် စကားမပျက်သေးပဲ ရှိနေသည်။၄နှစ်သားလေးတယောက်နှင့်အဖေအမေ။ဒီမိသားစုကိုကြည့်ပြီးကျနော၎,၅နှစ်အရွယ်ကိုတောင
ဆရာဝန်ကြီးအံ့သြသွားသည်.ကလေးက ဆက်ပြောသည် ”ညီမလေးအိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တာ ညီမလေးအတွက်နောက်တလုံးထပ်ပေးပါ”..ဆရာဝန်ကြီးကသဘောကျပြီးနောက်တလုံးထပ်ပေးလိုက်ပါသည်။
သူဒီသကြားလုံးကိုသူ့ညီမလေးဆီသေချာယူသွားမှာကိုပါ။ညီမနှင့် အတူ အတူတူစားကြမှာကို ကျနော်ခံစားလို့ ၇နေပါသည်။
သူနာပြူဆ၇ာမလေးကကျနော့ကိုဝင်ဖို့ ပြောနေပါသည်ဒါပေမယ့်ကျနော်ခြေဆုံ၇ပ်၇င်းမှင်သက်နေပါသည်။၄နှစ်အရွယ်တုန်းက ကျနော် ညီမလေးလိုချင်ကြောင်းအမေ့ကို ပူဆာပုံတွေ ညီမလေးရလာတော့ ပျော်နေတဲ့ ကျနော် ..ကျနော်၈နှစ်မှ မွေးလာတဲ့ ညီမလေးကို အစစအရာရာ အကုန်လုပ်ပေးလေ့ရှိတာတွေ ညီမလေး အလိုရှိရာ အားလုံးဖန်တီး ပေးလေ့ရှိတာတွေ အားလုံးအားလုံးကို ကျနော်ပြန်မြင်လာပါသည်။ကျနော်ညီမကို ကျနော်ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ ကျနော်အသိဆုံးပါ အဖေအမေ မရှိ တာဝန်ပိနေတဲ့ ကျနော် ညီမလေးကို ဒုက္ခအိုးလို့ မြင်ပြီးလျစ်လှူရှူခဲ့တာတွေတကိုယ်ကောင်းဆန်မိတာတွေကိုနောင်တရမိသည်။ညီမလေးအတွက်က ကျနော်တယောက်ထဲရှိပါသည်သူ့လိုအပ်ချက်တွေကျနော့မှမပြော၇င်ဘယ်သူသွားပြောမည်နည်း။
့ခဏ ခဏ ငြင်းခဲ့ တာကျနော့ အမှားပါ ညီမလေးကို ပိုဆိုးစေအောင်တွန်းပို့ ခဲ့တာကျနော်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာ မြင်လာပါသည်။
ဆရာဝန်ကလေးအား ပေးလိုက်သောသကြားလုံးလေးမှာအလွန်သေးငယ်ပါသည်။သို့သော်ကလေးပြလိုက်သော မေတ္တာထုထည် မှာ အံ့မခန်းကြီးမားသည်။ကျနော့အားလည်း အမြင်မှန်ရစေပါသည်။ညီမလေးသာ မရှိရင် ကျနော့ဘ၀သည်အလွန်အထီးကျန်မှာသေချာပါသည်။ဒီလိုနှင့်ညီမလေးတယောက်ရှိခြင်းကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်လိုက်ပါတော့သည်။
ညီအကို မောင်နှမ အများ ချစ်ခင်ကြစေသား။ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
In: ဆောင်းပါး Posted By: dan Date: Dec 25, 2010
မသိခြင်းများ . . . . .
Leave comment 10 Comments & 270 views
By: Aung Thet Paing at Dec 25, 2010
အရမ်းကောင်းပါတယ် အားကျမိပါတယ် ညီမလေးကိုသိပ်ချစ်တဲ့အကို တစ်ယောက်ရှိတာ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် တကယ်အားကျမိပါတယ်
By: saungthakhin at Dec 27, 2010
မေတ္တာဆိုတာရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်…..ကိုဒန်ညီမလေးက မေတ္တာလိုချင်နေတာပါ……….. မေတ္တာပေးပီးသွန်သင်ရင်ညီမလေးလိမ်မာလာပါလိမ့်မယ်…………….
သူကလဲကိုဒန်ကိုအဖေအမေအစားနွဲ့ဆိုးဆိုးတာပါ……….. နားလည်ပေးပီးမေတ္တာသာများများပေးလိုက်ပါနော် …
အပျော်တမ်းရေးပြီး စာဖတ်သူတို့ တခုခု ခံစား၇ဖို့ creation သက်သက်ပါ ကျနော်က အငယ်ဆုံးလေးပါ ညီမလေး မောင်လေး မရှိရှာပါ။မမေခကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆောင်းသခင် အကိုလိုချင်ပါတယ်တဲ့ ကြော်ငြာပေးပါ့မယ် မွေးစားအကိုများ ဆက်သွယ်ကြပါ။
By: dan at Dec 27, 2010
ကောင်းပါတယ်ဗျာ အားပေးသွားတယ် ကိုဒန်ရေ…………
တော်တော်ကိုကျကျနန တွေးထားတာဘဲ ။
အခုလို လာဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ မနွေးနွေး။
အားပေးသွားတယ်….ကိုယ်ချင်းလည်းစာတယ်…..မိုးလည်း ညီမလေးကို သိပ်ချစ်တယ်
By: အသဲကွဲမိုး at Jan 25, 2011